कन्हैया कुमार र ओकासियोजस्ता नेता नेपालमा किन उदाएनन्? - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सुमनकुमार पंगेनी बैशाख ११
पछिल्लो समयमा विश्व राजनीतिमा देखिएको युवाहरुको फरक र सशक्त उपस्थितिका दुई र अलग राजनीतिक धार छोटो समयमै स्थापित भएको एक गरी तीन वटा प्रसंग यस लेखमा जोडिने छ। भारतको बेगुसराय (बिहार) बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका कन्हैया कुमार, सबैभन्दा कम उमेरमा अमेरिकाको कंग्रेसमा प्रतिनिधित्व गरेकी ओकासियो कोर्टेज र हालै थाइल्याण्डमा सम्पन्न निर्वाचनमा छोटो समयमै लोकप्रियता प्राप्त गरेर तेश्रो स्थान हासिल गर्न सफल फ्युचर फरवार्ड पार्टीको बारेमा उल्लेख गदै ती सन्दर्भहरुलाई नेपाली परिवेशमा जोडेर प्रस्तुत गरिनेछ।
के हाम्रो देशमा स्थापित राजनीतिक दलहरुले कन्हैया कुमारलाई उनको पार्टीले स्थान दिए जस्तै युवा र अलग आवाजलाई उचित स्थान दिइरहेका छन् त? युवालाई अपरिपक्कतासँग जोडेर हेर्ने र पहिले आफैँ सत्ता र राजनीतिको स्वाद लिन्छु तिमीहरु सिक्दै गर भन्नेजस्ता व्यवहारहरु देखिन्छन्। नेतृत्व अवसरका लागि कुरेर बस्नुपर्ने र नेताको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता चिर्न राजनीतिमा लागेका वा लाग्न चाहेका युवाहरु कति जागरुक छन्? नेपालको वर्तनमान पार्टी राजनीति परिदृश्यमा यो एउटा पेचिलो र महत्वपूर्ण सवाल हो।
भारतीयहरूले कन्हैया कुमारका बारेमा अल्पसंख्यकको आवाज बोल्ने सच्चा विद्रोही र आरोपीलाई फाँसी दिने निर्णयको विरोध गर्ने घोर राष्ट्रविरोधीको दुई विपरित छवि भारतीयहरुले बनाएका छन्। अतिवादी राजनीति हाबी भइरहेको बेला उनको चुनावी लडाईलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएर विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन पूरा गरेका कन्हैयाकुमार पछिल्लो समयमा आर्थिक रुपमा सबल र सम्पन्न जीवनशैली बिताउने हैसियत बनाएर पनि राजनीतिमा होमिनुलाई त्याग र समर्पणको भावले हेरिएको छ। त्यसैले हरेकजसो ठाउँमा मुख्य प्रतिस्पर्धा भाजपा र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसबीच हुने भारतको चुनाबमा बेगुसराइ, बिहार निर्वाचन क्षेत्रमा सीपीआई (माले) का उम्मेदवार कन्हैया कुमारको चर्चा चुलिएको छ। फरक आवाज बोलेर युवा अवस्थामै नेतृत्व र प्रतिनिधित्वका लागि अग्रसर उनलाई कैयौं पुराना र धेरै वर्षदेखि राजनीतिमा लागेकाहरुले समेत चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि ठाउँ खुला गरेका छन्।
न्यूयोर्ककी २९ वर्षिया ओकासियो कोर्टेज अमेरिकी कंग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेर मै निर्वाचित भएर चर्चित भइन्। ७८ प्रतिशत मतका साथ विजयी उनले विपक्षी पार्टीका 'हेभिवेट' उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धी हुने हिम्मत जुटाउनुलाई अर्थपूर्ण रह्यो। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार हराउनभन्दा कठिन त उनलाई आफू उम्मेदवार बन्न थियो। डेमोक्र्याटले सधैँ जित्दै आएको न्यूयोर्कको ब्रोन्क्स एन्ड क्विन्स निर्वाचन क्षोत्रबाट जोए क्रोउलीले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए। जोए सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका चौथो नम्बरका नेता थिए। उनले डेमोक्रेटिक पार्टीमा तत्कालीन संसदीय दलकी नेता नेन्सी पोलिसी प्रतिस्थापन गर्ने नेताको रूपमा हेरिएको थियो। आश्चर्यजनक परिणाम ल्याउँदै पार्टीको प्राइमरी चुनाबमा ओकासियोले जोएलाइ पराजित गरिदिइन्।
चिकित्सा, आवास सुविधालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएकी उनले धनी र गरिबबीचको विभेद हटाउने मुद्दा लिएकी छिन्। जीविकोपार्जनका लागि दैनिक काम गर्नुपर्ने पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा होमिएकी उनले चुनाब जिते लगत्तै वासिंटन डिसीमा अपार्टमेन्ट भाडा तिर्न आफूसँग पैसै नभएको सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
याे पनि: न्यूयोर्कको बारमा काम गर्ने यी युवती जसले चुनावमा इतिहास रचिन्
रचनात्मक सोच राखेर राजनीतिमा होमिए उमेर नै परिपक्ताको निर्धारक होइन भन्ने कुरा ओकासियोको जितले सावित गर्छ। तर के यस्तो नेपाली लोकतन्त्रमा सम्भव छ? के हाम्रो देशको सन्दर्भमा यसरी नै सशक्त र अडानसहितको बहस उठान गरेर आउन खोज्ने युवाले राजनीतिमा मौका पाउँछन् त? यो हदसम्मको इमान र निष्ठाको भरमा नेपाली राजनीतिमा उदाउन सम्भव छ?
विकास र समृद्धिमा राजनीतिक नेतृत्व असफल बन्दै गएको अवस्थामा यी प्रश्नहरू पेचिला देखिन्छन्। नेपालको पार्टी राजनीतिमा समस्याहरुलाई वस्तुगत रुपमा केलाएर आउने दीर्घकालीन सोचसहितको योजनै देखिँदैनन्। बरू फगत तत्कालका अरुलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने हिसाबले ल्याइएका एजेण्डाहरु हाबी छन्।
पुराना दलहरूले राज्यका राजनीतिक नगर्ने अंगहरूको समेत राजनीतिकरण गरेका छन्। इमान, योजना र अभियानभन्दा समाजलाइ सुक्ष्म रूपमा राजनीतिक चस्माले मात्रै हेर्ने गरिएको छ। मुद्दामा आधारित भएर मतदान गर्ने परिपाटीले नेपाली राजनीतिमा स्थान पाउन सकेको छैन। मुद्दा र निष्ठा आधारित नहुने मतदानबाट उदाउने प्रतिनिधित्व जनउत्तरदायी र जिम्मेवार नहुनु अस्भाविक होइन।
फ्युचर फरवार्ड पार्टी
हालै थाइल्याण्ड सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा भर्खरै मात्रै राजनीतिमा उदाएको फ्युचर फरवार्ड पार्टी तेश्रो भएको छ। ५०० जना सांसद रहने थाइल्याण्डको संसदको तल्लो सदनमा ३५० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान रहेकोमा उक्त पार्टीले ८८ सिट जितेको छ। टिभीमा प्रत्यक्ष प्रसारित चार पार्टीका नेताहरुसँगको बहसमा प्रधान सेनापतिको नामै लिएर चुनौती दिदै फ्युचर फरवार्ड पार्टीका एक नेताले सोधे, 'सेनाले प्रतिनिधि सभालाई भंग गर्ने साहस राख्छ? के प्रधानसेनापतिले हामी ५०० जनालई गोली ठोक्ने साहस राख्छ?' सेनाको वर्चश्व रहेको थाइल्याण्डमा यति प्रखर आवाज मुखारित गर्नु सामान्य कुरा थिएन।
'म १% बाट आए तापनि ९९% लाई प्रतिनिधित्व गर्छु', केही महिना अगाडि प्रकाशित अन्तरवार्तामा सोही पार्टीका एक नेताले भनेका थिए। उदारवादी सोचका साथ अगाडि आएको फ्युचर फरवार्ड पार्टीले युवा पुस्ताको सोच र विचारलाई उपेक्षा गरिनु स्थापित राजनीतिक शक्तिको कमजोरी हुन सक्ने पुष्टि गरेको छ। अलग धार र युवा आवाजलाई एकै साथ उठाएकोले उक्त पार्टीको प्रतिनिधित्वलाई महत्वका साथ हेरिएको हो।
नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म स्थापित राजनीतिक शक्तिको विकल्प खोज्नुभन्दा उनीहरुलाइ नै ठूलो र मजबुत पारेर विकास र समृद्धिले गति लिन्छ भन्ने मनोविज्ञान मतदाताहरुमा व्याप्त छ। नागरिकको उदात्त भावनालाई उनीहरुले उपेक्षा गरिरहेकाले वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना पनि बलियो बन्दै गइरहेको छ।
विगत ३० वर्षको सत्ता अभ्यासमा नागरिकका आकांक्षालाई कामले सम्बोधन गर्नेभन्दा आफ्नो राजनीतिक सञ्जाललाई राज्य दोहन गरेरै पकडमा पार्नमा सबैजसो ठूला र स्थापित राजनीतिक दलहरु केन्द्रित देखिए। आफूलाई अलग र मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध बताउने दलहरुले नागरिकले बुझ्ने भाषामा आफ्नो कुरा बताउन नसकेको पनि हुन सक्छ। नेतृत्वको जनआकांक्षाप्रतिको बारम्बारको अपमानलाई गतिलो जवाफ दिने नागरिक चेतना बढ्दै गएकोले राजनीतिले नयाँ आयाम लिन सक्ने सम्भावना दरिलो बन्दैछ।
राजनीतिमा रुचि राख्नेहरुले इमान्दारीका साथ एकजुट भएर अगाडि बढ्ने विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ। देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीहरुको उर्जालाई देश निर्माणमा सिञ्चित गर्न सके नेपाल अवश्य बन्छ। राजनीतिक सोच नेपाली माटो र परिवेश सुहाउँदो निर्माण गरेर नागरिकका आकांक्षाहरु प्रतिबिम्बित गर्दै अगाडि बढे एकै पुस्तामा नेपालको रुपान्तरण सम्भव छ।
प्रकाशित ११ बैशाख २०७६, बुधबार | 2019-04-24 14:17:28
सुमनकुमार पंगेनीबाट थप